Smart-7 Mobile Service&Training Centre (မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း) - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Online နည်းပညာများ Smart-7 Mobile Service&Training Centre (မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း)
Smart-7 Mobile Service&Training Centre (မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း)
Min Oaker at 12:27:00 AM Online နည်းပညာများ,
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ နည်းပညာ Post မဟုတ်ပါဘူး.
မိုဘိုင်းဖုန်းသင်တန်း တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ.
ဖုန်းသင်တန်းတက်ချင်နေတဲ့သူတွေ ဆိုရင် ကျော်မသွားဘဲ အချိန်အနည်းလေးပေးပီး
ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ..
တခြား သင်တန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကျနော့် ဆရာ ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပီး ဖွင့်တဲ့ သင်တန်းပါ...
ကျနော့်ရဲ့ ဆရာနဲ့ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သင်ကြားမယ့် သင်တန်းဆိုလည်း
မမှားပါဘူး... :D Mobile Software & Hardware အကြောင်းကို နှိက်နှိက်ချွတ်ချွတ်
နားလည်တတ်ကျွမ်းအောင် သင်ပေးမယ့် သင်တန်းဆိုလည်း မမှားပါဘူးး
စာကိုတော့ဖွဲ့နွဲ့ပီး ရေးမတတ်တာတော့ အမှန်ပါ..:D
ကျနော်တို့ Blogger တွေကိုယ်တိုင်ကိုက ပြောရင်တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့
နည်းပညာတွေ ဝေမျှချင်လွန်းလို့သာ နည်းပညာလောကထဲ ၀င်လာတာပါ.
ခုမှ ဆရာ့ ရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ ဒီလို ဖုန်းသင်တန်းမှာ သင်ကြားခွင့်ရှိလာတာပါ..
Online မှာ နည်းပညာ ဝေမျှရတာ တကယ်တော့ အတိုက်အခံတွေကြားက ဝေမျှရတာပါ..
ကိုယ့်ထက် ဆရာ့ဆရာ ကျတဲ့ သူတွေဆိုလည်း အများကြီးပါ.. ဒါကြောင့်မို့လည်း နည်းပညာတွေ
အကုန် မချပြရဲပါဘူး.. ခုတော့ သင်တန်းကြေး အနည်းငယ်နဲ့ သင်တန်းသားတွေကို ထိန်ချန်ထားခြင်း
မရှိဘဲ ချပြရခွင့်ရတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းလည်း ၀မ်းသာမိပါတယ်...
သင်တန်းမှာ ဆရာနဲ့ တပည့်ဆိုပီး စည်းကမ်းတွေ သတ်မှတ်ထားတာ မရှိပါဘူ... သူငယ်ချင်းတွေလို
မေးမြန်းဆွေးနွေးတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ သင်ပြသွားမှာပါ..တကယ်တော့ သင်တန်းသားတွေကိုလည်း ကျနော်တို့
အထင်မသေးပါဘူး.. အားလုံးတော့ မတတ်လို့ လာသင်တဲ့ သင်တန်းသား မရှိသလောက်ပါဘဲ..
နည်းပညာလောကမှာ ဘာမှ မသိ ဘာမှ မတတ်တဲ့ လူတွေဆိုတာက ခပ်ရှားရှားပါ. သူ့ကဏ္ဍနဲ့ သူတော့
တတ်ကျွမ်းပီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်. သိချင်တာလေးတစ်ခုရှိလို့ ဒီပညာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုချင်လို့ ဆိုပီးလာတတ်တဲ့သူတွေသာ ရှိပါလိမ့်မယ်...လေကြောနည်းနည်းရှည်သွားပီ..:P
Software ပိုင်းကို ကျတော့ လက်ရှိ လူအသုံးများနေတဲ့ Android နဲ့ IOS တွေကို အခြေခံကစပီး
ယခု လက်ရှိ hot ဖြစ်နေတဲ့ error တွေကိုပါ တခါတည်း ရှင်းပြသွားမှာပါ...
Android ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ လက်ရှိအသုံးများနေတဲ့ Samusng , Huawei , Xiaomi, Coolpad , Sony, Oppo, Vivo, X-Bo,China ကလာတဲ့ Clone ဖုန်းပါ မကျန် Official Firmware တင်ခြင်း,Custom Fimrwareတင်ခြင်း,Root လုပ်ခြင်း,Pattern,Password,Pin တွေကိုData တွေမပျက်ဘဲ ဖြည်နည်းများပါ
သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်....ဒါ့အပြင် Huawei ဖုန်းတွေကို SD card နဲ့ Firmware တင်တဲ့နေရာ အခက်အခဲရှိသူတွေအတွက် SD card နဲ့မှ တင်လို့ ရမယ့် Firmware
တွေကို PC မှာ ဖြည်ချပီး PC ကနေ တိုက်ရိုက်တင်လို့ ရမယ့်နည်းပါ ဆရာစား မချန် သင်ကြားပေးသွားမှာပါ...
ထို့အပြင် ADB command သုံးပီး Password ဖြည်တာတွေ Tool တွေသုံးပီး Reset ချတာတွေ ကိုပါမကျန်သင်ကြားသွားမှာပါ...ထို့အပြင် Huawei,Sony ဖုန်းများ Bootloader Unlock လုပ်နည်းပါ သင်ကြားပေးသွားမှာပါ.ပြီးတော့ အရေးကြီးတဲ့ မြန်မာဖောင့်ထည့်သွင်းနည်း မြန်မာစာမမှန်တာတွေကို မှန်အောင် နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ဖြေရှင်းနည်းတွေကို သင်ကြားပေးသွားမှာပါ...
ထို့အပြင် Fake IMEI Error , IMEI null/null Error, (အချို့သော Android ဖုန်းတွေမှာ IMEI ရှိပီး ဖုန်းခေါ်လို့ မရတဲ့ Error တွေနဲ့လိုင်းတိုင်တက်ပီး ဖုန်းခေါ်လို့ မရတဲ့ Error များကို Tool တွေနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေအပြင် (Miracle,Z3X,GPG,Sigma,) အစရှိသော Box များဖြင့်လည်း
ချွင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ နည်းပညာသမားမှန်ရင် Gmail တစ်ခုတော့ ရှိရစမြဲဆိုတဲ့အတိုင်း မိမိရဲ့Facebook နဲ့Gmail တစ်ခုကို ဘယ်လို လုံခြုအောင် ထိန်းသိမ်းမလဲ ခိုးခံရရင်တောင် ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ ..ခိုးမခံရအောင် ရော ဘယ်လိုတွေ လုပ်ထားသင့်လဲ ပါမကျန် သင်ကြားပေးသွားမှာပါ..ဒီအချက်က ဖုန်းနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး ဘာလို့သင်တာလဲ မေးစရာဖြစ်လာပါတယ် .. ဟုတ်ကဲ့ အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါ...မိတ်တွေတို့ရဲ့ FB acc ဆိုတာက နည်းပညာသမားတစ်ယောက်အတွက် အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်...မိမိ Like လုပ်ထားတဲ့ Page မိမိ Member ၀င်ထားတဲ့ Groupန်ပြောရ ..ကုန်ကုရင် acc ကို ပြန်ဖွင့်ရတာ လွယ်ပါတယ် . ဒါပေမယ့် မိမိနဲ့ Fri ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေနဲ့ Fri ပြန်ဖြစ်ဖို့ကတော့ ရာခိုင်းနှုန်းအတော်နည်းပါတယ်..ဒါကြောင်း မိမိရဲ့ Facebook acc lock ကျသွားလို့သော်လည်းကောင်း.. ခိုးခံရလို့သော်လည်း ကောင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ဖို့
သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်..Gmail ဆိုလည်း ဒီအတိုင်းပါ မိမိ Follow လုပ်ထားတဲ့ site တွေ blog တွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်မှာပါ..ဒါကြောင့် မိမိ အကောင့်ကို လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
IOS အပိုင်းကျငေ်းကို Firmware တတာ့ iPhone 3Gs က စလို့ …နောက်ဆုံး ထွက် iPhone 6S , 6S+ တွေ အထိ ၊ iPod , iPad အစ ရှိတာတွေ နဲ့ …iOS ပိုင်ခြင်း Jailbreak လုပ်ခြင်းအပြင် Cydia Tweak များရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် အသုံးပြုပုံများကိုလည်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်းသင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
Hardware ပိုင်း အတွက်ကတော့ …တစ်နေ့ကို ၃ နာရီ သင်ကြားပေးပြီး
လိုလေသေး မရှိလောက်ကို လေ့လာ သင်ယူစေပါတယ် Power Supply အသုံးပြုပြီး ရှော့ ရှာနည်းများ ၊ Hot Gun အသုံးပြုပြီး IC များ ဖြုတ်ပုံ တပ်ပုံ … ၊ ခဲဂေါက် အသုံးပြုပြီး ခဲကို သေသပ်အောင်ဖော်ပုံ၊ ခဲရှင်းပုံ နှင့်Touch& LCD ကွဲတာတွေကိုပြန်တပ်ရာတွင် လက်ရာမထင်အောင် ဖုန်မ၀င်အောင် တပ်ဆင်နည်းများကို စနစ်တကျ အသေးစိတ် သင်ပြပေးခြင်း၊
အားသွင်းခေါင်းဖြုတ်ရာတွင် Data ပင်များ ပါမသွားအောင် စနစ်တကျ ဖြုတ်တတ်အောင် သင်ပေးခြင်းအပြင် Model မြင့် LCD&Touch တွဲလျှက်ပါသော ဖုန်းများ Iphone6plus, Iphone 6, Note 3, Note4, S5 များကိုအပေါ်မှန်သီးသန့် လဲလှယ်ပေးခြင်းတို့ကို စနစ်တကျသင်ကြားပေးခြင်း၊ ထို့အပြင် ဖုန်းတစ်လုံးတွင် ပါဝင်သော Component များအကြောင်း၊
IC များရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ Component များနှင့်IC များတို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်အလုပ်လုပ်ပုံ(သက်ဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းရှိ သက်ရောက် Volt များ မှန်မမှန် စစ်ဆေးပုံ)
အကြောင်းကို သဘောတရားများရှင်းပြပေးရုံသာမက Power IC, EMMC, CPU, အစရှိသော IC အမျိုးမျိုးတို့ကို Hot Gun အသုံးပြု၍ လေ၊အပူချိန်၊ လက်ဆ မှန်ကန်စွာ စနစ်တကျ ဖြုတ်တတ်စေရန် သင်ကြားပေးခြင်း၊ ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏(Touch,Backlight,Network) ဖြစ်တတ်သော
Error များကို ဖြေရှင်းတတ်စေရန် စနစ်တကျ သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် Diagram ကြည့်နည်းများပါအပြင် Deatboot ဖြစ်နေသော ဖုန်းများကို Box များသုံးပီး
ပါဝါနိုးလာအောင် လုပ်ခြင်း တို့ကိုပါ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်အောင် သင်ကြားပေးမှာပါ..
သင်တန်းသား/သူ တွေကိုလည်း လိုအပ်တဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Update Data များကို Support ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..နောက်နောင်လည်း မည်သည့် Data ကို မဆို အချိန်မရွေး အခမဲ့ လာရောက် ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်...ကျနော်တို့ Smart-7 Mobiel Service&Training Centre သင်တန်းရဲ့ အဓိက ဦးစားပေးထားတဲ့အချက်ကတော့ လာရောက်သင်ကြားသော သင်တန်းသားများ အနေနဲ့ နည်းပညာအခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိရလေအောင် သင်တန်းပြီးဆုံးသွားသော်လည်း ဖုန်းဆက်၍သော်လည်းကောင်း၊သင်တန်း Page မှသော်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍သော်လည်းကောင်း အချိန်မရွေး အကူအညီများ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
သင်တန်းကြေးကတော့ Software&Hardware ၂ မျိုးလုံးအတွက် (400000) ပါ။
နယ်မှ သင်တန်းသားများအတွက် အဆောင်ငှားဖို့ အခက်အခဲမရှိရလေအောင် ကျနော်တို့ အဆောင်စီစဉ်ထားပေးပါတယ် .Software & Hardware ၂ မျိုးလုံးတက်ပါက အဆောင်ခက Free ပါ.. တစ်မျိုးတည်း တက်ချင်ရင်တော့ ၂သောင်းခွဲပါ..သင်တန်းကတော့ ၂ လ အပြတ်ပါ..
အချိန်မအားလပ်သူများနှင့် အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချလိုသူများအတွက် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ တန်းခွဲများလည်းရှိပါသည်။
FB Page မှာလည်း လာရောက် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်..
Smart-7 Mobile Service & Training Centre
၂၂ ရက်နေ့အထိ နောက်ဆုံးထားပီး စာရင်းပေးသွင်းထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့် ရက်ကတော့ ၂၃.၁၂.၂၀၁၅(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)ဖြစ်ပါတယ်.။
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ စာကိုအဆုံးထိ ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ..